Autodesk dia manolotra ny "The Big Room" ho an'ny matihanina amin'ny fanamboarana
Vao haingana ny Autodesk Construction Solutions dia nanambara ny fanombohana ny The Big Room, vondrom-piarahamonina an-tserasera mamela ny matihanina amin'ny fananganana trano hifandray amin'ny hafa ao amin'ny indostria ary hifandray mivantana amin'ny ekipa Autodesk Construction Cloud. Ny Big Room dia ivotoerana an-tserasera natokana mazava ho an'ireo matihanina ao ...
Leica Geosystems dia manangona fonosana scanning laser 3D vaovao
Scanner Leica BLK360 Ny fonosana vaovao dia misy ny scanner sary laser an'ny Leica BLK360, ny lozisialy desktop Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) ary ny Leica Cyclone FIELD 360 ho an'ny takelaka sy telefaona. Ny mpanjifa dia afaka manomboka eo noho eo amin'ny fifandraisana tsy misy tohiny sy ny fizotran'ny asa avy amin'ny vokatra azo avy amin'ny zava-misy ...
Famaritana indray ny foto-kevitra ara-teknika Geo-Engineering
Miaina fotoana manokana isika amin'ny fihaonan'ny fifehezana izay efa an-taonany maro no nizara. Fanadihadiana, famolavolana maritrano, sary an-tsipika, famolavolana firafitra, fandrindrana, fananganana, marketing. Mba hanomezana ohatra ny amin'ny ony nentim-paharazana; tsipika ho an'ny tetikasa tsotra, miverimberina ary sarotra fehezina arakaraka ny haben'ny tetikasa. Androany, nahagaga ...
AUTODESK ANNOUNCES REVIT, INFRAWORKS, AND CIVIL 3D 2020 Autodesk dia nanambara ny famoahana ny Revit, InfraWorks, ary sivily 3D 2020. Revit 2020 Miaraka amin'ny Revit 2020, ireo mpampiasa dia afaka mamorona antontan-taratasy marina kokoa sy amin'ny antsipiriany izay maneho tsara kokoa ny tanjon'ny famolavolana, mampifandray ny angona ary mamela fiaraha-miasa sy fanaterana ireo tetik'asa misy fitoniana lehibe kokoa. Fanampiana ho…
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Microstation-Bentley
Soraty ny teboka, lin-rindrina ary andalan-tsoratra amin'ny polygonal avy amin'ny Excel mankany AutoCAD
Manana an'ity lisitry ny fandrindrana ity ao amin'ny Excel aho. Ao anatin'ireny dia misy koordinatiora X, fandrindrana Y, ary anarana koa ho an'ny vertex. Ny tiako hatao dia ny manintona azy ao amin'ny AutoCAD. Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny fanatanterahana ny script avy amina lahatsoratra mifangaro ao amin'ny Excel izahay. Mampiasà baiko iray amin'ny fampidirana teboka ao ...
Autodesk Office for mahafaty
Ny traikefan'ny fianarana sy ny fampianarana BIM ao anatin'ny toe-javatra efa mahazatra amin'ny CAD
Nanana fotoana nifaneraserana tamin'i Gabriela farafahakeliny intelo aho. Voalohany, amin'ireo kilasy eny amin'ny anjerimanontolo izay saika nifanindry zareo tao amin'ny Faculty of Engineering sivily; avy eo amin'ny kilasy azo ampiharina amin'ny Teknisiana mpanao fanorenana ary avy eo amin'ny tetikasan'ny tohodrano Rio Frío ao amin'ny faritry Cuyamel, ao ...
Autodesk BIM I-modely
AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS, Microstation-Bentley
Rindrambaiko tsara indrindra amin'ny fanamboarana - mari-pahaizana momba ny informatika fananganana 2018
Ity dia fifaninanana manome valisoa ny ezaka tsara indrindra nataon'ny lozisialy mifantoka amin'ny Architecture, injeniera ary ny fanamboarana. Ity lisitra famaranana ity dia milaza amintsika ny fomba ifaninanan'ny mpamatsy vahaolana lehibe ho an'ny geoengineering amin'ny andiany fahatelo ambin'ny folo. Nanamarika marika marika safidinay tamin'ny loko hafa izahay mba hanamorana ...
AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, Microstation-Bentley
Tsindrio ny koorda ao amin'ny AutoCAD avy amin'ny rakitra CSV Excel
Nankany an-tsaha aho, ary nandinika isa 11 tamin'ny fananana iray, araka ny hita eo amin'ny sary. Ny 7 amin'ireo teboka ireo dia ny fari-tanin'ny toerana banga, ary efatra ny zoron'ny trano avo. Rehefa misintona ny angon-drakitra aho dia nanova azy ho rakitra misaraka amin'ny koma, fantatra amin'ny anarana hoe ...
Ahoana ny fampidinana ny AutoCAD 2018 - kinova fanabeazana
Ny kinova fanabeazana an'ny AutoCAD dia miasa tanteraka ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Raha te-hisintona ny kinovan'ny mpianatra AutoCAD dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto ianao: 1. Midira amin'ny pejy AutoDesk. Midira amin'ny kaontinao na mamorona iray vaovao. Ny rohy fampidinana kinova fanabeazana dia tsy maintsy safidiana: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Jan amin'ity tranga ity, izaho dia…
BIM - Izao tontolo izao nofinofisiko 20 taona lasa izay
20 taona aty aoriana, ny BIM ihany no azoko ampifandraisina amin'ny evolisiona izay nasehony tamin'izany fotoana izany handao ny tabilao fanaovana sary sy hanadihady taratasy ho an'ny fisie CAD. Fivoarana manaitra izany, raha jerena fa avy amin'ny maha mpanao drafitra mpanao chinographer sy calculer an'ny calculator notebook + + Lotus 123. Toa nahavariana ny mino ...
Free AutoCAD courses 3D - Revit - Microstation V8i 3D
Androany miaraka amin'ny Internet eto an-toerana, dia tsy fialan-tsiny intsony ny fianarana. Manomboka amin'ny fahalalanao ireo algorithma izay tsy fantatrao akory dia nisy hatramin'ny fananganana ny goba Rubik tany amin'ny lisea hatramin'ny fianarany AutoCAD maimaimpoana an-tserasera. Ny maha-zava-dehibe ny maodely 3D dia fantatray fa ny hoavin'ny CAD dia ao amin'ilay maodely fantatra amin'ny hoe BIM.…
Autodesk Bentley Systems sivily 3D
AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS
View ary niova fo dwg antontan-taratasy avy amin'ny dikan-ny AutoCAD
Amin'ny ankapobeny, rehefa mandefa fisie dwg aminay izy ireo dia mazàna misy olana amin'ny kinova izay nahavoavonjy azy ireo. Ireto misy fomba sasany hamahana ny olana: inona ny kinovan'ny dwg Tsy azo fantarina izany, satria misy extension .dwg na .dxf fotsiny ilay rakitra fa tsy fantatra izany raha tsy manandrana manokatra azy izahay.…
Ny fahatakarana BIM foto-kevitra, ny raharaha Bentley Systems
Amin'ny teny notsorina, ny BIM (Building Information Modelling) dia fivoaran'ny foto-kevitra nentim-paharazana antsoina hoe CAD (Computer Aided Design) ary na dia misy aza ny boky iray manontolo nosoratana momba an'io taorian'ny nametrahan'i Jerry Laiserin ny teny hoe, ho an'ny fanabeazana dia hiezaka izahay mba ho tsotra araka izay azo atao: Talohan'izay, rehefa mamorona trano, ny mpanao mari-trano aorian'ny fiaraha-miasa tsara ...
Autodesk Bentley Systems DGN I-modely
Featured, fanavaozana, Microstation-Bentley
Plex.Earth maka sary avy amin'ny Google Earth Tsy ara-dalàna ve izany?
Hitanay ny fandaharana sasantsasany talohan'io naka sary io avy amin'ny Google Earth. Georeferencing na tsia, ny sasany tsy misy intsony toa ny StitchMaps sy GoogleMaps Downloader. Andro hafa nisy namako nanontany ahy raha mandika ny politikan'i Google na tsia ny ataon'i Plex.Earth avy amin'ny AutoCAD. Izay lazain'ny voambolana Google http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…
5 2013 endri-javatra vaovao ny AutoCAD
Ny sasany amin'ireo vaovao hitantsika tamin'ny kinova beta an'ny AutoCAD 2013 niantso ity kinova Jaws ity dia milaza amintsika izay fironana ho hitantsika amin'ny aprily 2012, rehefa hanomboka amin'ny fomba ofisialy izy io; na dia zara raha nandevonantsika ny AutoCAD vaovao 2012. Tamin'ny voalohany ny vaovao efa fantatra: endrika vaovao dwg 2013!. The ...
AutoCAD-Autodesk, fanavaozana, My egeomates
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 8 Next pejy